Ngaba iDisney plus inaye uHarry Potter? - LifeBytes | LifeBytes
Ngaba iDisney plus inaye uHarry Potter?
Encarni Arcoya | 29/05/2022 20:27 | Ukuhlaziywa ukuba 31/05/2022 08:37 | Ukonwabisa
Ngothotho oluninzi kunye namaqonga emuvi esinawo akunakuphepheka ukuphulukana nombono wokuba singazibona phi ezinye zeemuvi zethu esizithandayo. Iinjini zokukhangela zihlala zizaliswe yimibuzo malunga nokuba ngaba iDisney Plus inaye uHarry Potter, okanye singabukela ixesha lamva nje likaGqirha Ngubani kwiNetflix.
Ukuba ungomnye wabo bafuna iimuvi zikaHarry Potter kwaye uyazibuza ukuba ngaba iDisney Plus inabo, apha uya kufumana impendulo. Nangona usenokungayithandi.
1 IDisney Plus: yeyiphi ikhathalogu enayo?
2 Ngaba iDisney Plus inaye uHarry Potter?
3 Ngaba uHarry Potter uza kuba kwiDisney Plus kwixesha elizayo?
4 Ungayibona phi enye indawo uHarry Potter?
5 Yintoni eyongezelelweyo onokuyifumana kwi-HBO Max
6 Iifilimu ezifana noHarry Potter
6.1 UPercy Jackson Saga
6.3 Umlingo ojonge phantsi
IDisney Plus: yeyiphi ikhathalogu enayo?
IDisney Plus liqonga ngaphakathi apho unokufumana khona amatye anqabileyo amakhuluzombini zangoku kunye nexesha elidlulileyo. Mhlawumbi, kunye neNetflix, eyona inezona ndidi zininzi kwaye ikuvumela ukuba ubukele iikhathuni kodwa kunye nezinye iimuvi kunye neentlobo.
Ekuqaleni, ngenxa yegama, kwakucingelwa ukuba kuya kuba ngabantwana kuphela. kodwa inyaniso kukuba inokuninzi ngakumbi. Umzekelo, iziqwenga ezibini eziphambili yiMarvel kunye neStar Wars. Kuphela ngabo uye wakwazi ukongeza iimuvi ezininzi, uthotho kunye namaxwebhu aquka uluhlu olukhulu lwababukeli, kwaye iipremieres zakhe zihlala zivelisa umdla omkhulu.
Kunye noku unamaxwebhu, afana nalawo eNational Geographic kunye nezinye ezitsala umdla wokwenziwa ngabantu abadumileyo.
Kancinci kancinci, yongeza umxholo ngakumbi nangakumbi kwikhathalogu yayo, kunye neqonga leNkwenkwezi elibandakanyiweyo kwiDisney. Ke, ngoku uyonwabela:
Zonke izinto zeDisney: imiboniso bhanyabhanya, uthotho, oopopayi abamfutshane, kuquka iSimpsons.
Pixar: ngeefilimu zakhe eziqale zakhuphisana neDisney kwaye ngoku ziyinxalenye yayo.
Marvel: ngeemuvi, uthotho kunye namaxwebhu malunga nendlela ezenziwe ngayo.
Idabi leenkwenkwezi: kunye nothotho kunye neemuvi.
KaZwelonke Geographic: kunye neengxelo.
inkwenkwezi: apha uya kufumana zombini iimuvi kunye nothotho lwabaphulaphuli abadala ngakumbi.
Inyaniso kukuba ukuba ubhalisele iDisney Plus kwaye ufuna ukubona iimuvi zikaHarry Potter Siyaxolisa ukukuxelela ukuba ayizukwenzeka. IDisney ayinazo ezo bhanyabhanya kwikhathalogu yayo, kwaye ibingenazo ngaphambili., kuba babenokubonwa kuphela kwi-Amazon Prime kwaye, abanye, kwiNetflix. Ngapha koko, azisekho kula maqonga nokuba (i-Amazon Prime inokukuvumela ukuba urente okanye uthenge enye).
Ngoku Inyaniso kukuba zonke iifilimu zikaHarry Potter, yonke i-saga, kuquka nezilwanyana ezimbini ezimangalisayo kunye nendawo yokuzifumana zigcinwe kwikhathalogu yeHBO Max. Ukuze uzibone, kuya kufuneka uye kweli qonga kwaye ubhalise.
Ngaba uHarry Potter uza kuba kwiDisney Plus kwixesha elizayo?
Siqala kwisiseko ukuba awukwazi. Kodwa namhlanje, zonke iimuvi zeWarner zezeHBO Max kwaye kulapho kuphela oya kukwazi ukuzibona. Ke, ukuba sigxile kwidatha yangoku, inyani kukuba akunakwenzeka ukuba iDisney Plus ifumane amalungelo kuHarry Potter kwixesha elizayo. Oko akuthethi ukuba ayinakwenzeka, kodwa okwangoku asiyiboni inokwenzeka.
Ungayibona phi enye indawo uHarry Potter?
Ngaphambi kokuba sikuxelele ukuba yonke i-saga kaHarry Potter ikwi-HBO Max, kodwa eneneni kukho iindawo ezininzi apho unokuyibona. Sikudwelisa bona ukuba ngaba awunamrhumo kweli qonga:
Play Store: Apha ungathenga zonke iimuvi, nangona zibiza kancinci.
iapile: Ungaziqasha ngexabiso elimiselweyo, nangona ingenazo zonke iimuvi.
Youtube: Kwi-Youtube ningazirenta nobabini kwaye nizithenge.
Amazon: Uhlelo lomqokeleli kunye neevidiyo ezisi-8 zeefilimu kunye nezinye ezongezelelweyo. Ukuba awunayo i-HBO Max kwaye uyazithanda ezi bhanyabhanya, lolona khetho lufikelelekayo.
Yintoni eyongezelelweyo onokuyifumana kwi-HBO Max
Ukuba ekugqibeleni uthathe isigqibo sokufumana iHBO Max Kuya kufuneka wazi ukuba uya kuba nokongezelelweyo abangayi kukunika nakweliphi na elinye iqonga, kwaye yinto enokuthi abalandeli bathande ngokwenene.
ENgoJanuwari 1, 2022, ifilimu ethi Harry Potter yakhululwa: Buyela eHogwarts, intlanganiso yeminyaka engama-20 apho abaninzi abathintekayo be-saga beza, kwaye babenobubele ngokwaneleyo ukutyhila ezinye zeemfihlo zabadlali kunye nefilimu engaziwa.
Ngoko ngaphandle kweefilimu, uya kuba nenye i-documentary enye ukuze ubone ukuba abalinganiswa batshintshe njani nayo yonke into ebingaziwa ngefilimu.
Iifilimu ezifana noHarry Potter
Nangona iDisney Plus ingenayo iHarry Potter, loo nto ayithethi ukuba ayinazo iimuvi ezinokukhuphisana nesaga yewizard. Enyanisweni, sicebisa ezimbalwa:
UPercy Jackson Saga
Kule meko akangomagqwirha, kodwa unguthixo kwaye ngenxa yoko kufuneka aziqeqeshe kwaye afunde, ke siya kuphila iiadventures zabo kwinkampu yoqeqesho yoothixo kunye nezidalwa zomlingo.
kukho iimuvi ezimbini kuphela, i-saga yayeka kodwa kukho iincwadi eziqhubekayo kunye ne-adventure yale protagonist yamadoda kunye nabahlobo bakhe.
Ukuba ukhulile kunye namakhosazana eDisney kunye "namagqwirha amabi" uya kuyithanda le saga. Ngokwenene kukujijwa kweklasikhi, kunye nabantwana bamakhosazana kunye nababi kakhulu.
Phakathi kwabo uya kufumana unyana kaCruella de Vi, intombi kaMaleficent, unyana kaYafar okanye intombi yokumkanikazi okhohlakeleyo we-Snow White, uGrimelda okanye uGrimhilde. Ewe, kuya kubakho nabanye abalungileyo, kwaye njengoko bethetha ngeqonga elingaphaya kwamabali asentsomini baye baba ngokoqobo ngakumbi.
Umlingo ojonge phantsi
Lo ayisiyiyo imovie eyaziwayo, kodwa inyaniso kukuba ikwangumlingo. Kuyo sifumana i-protagonist engena kwiSage Academy yoQeqesho lomlingo. Nangona kunjalo, ngenxa yokungazinzi kwakhe, intombazana yabelwe iklasi ye "reverse magic".
Ngoku uyazi ukuba iDisney Plus inoHarry Potter, into elandelayo onokuthi uzibuze yona kukuba kufanelekile ukuba neHBO Max. Ikhathalogu yayo ayikagqibi, kodwa inyaniso kukuba ayikho enye yeeplatifomu ezibiza kakhulu kwaye kutshanje yenza izibonelelo ezininzi ezifanelekileyo (ukuba nazo ngonaphakade ngexabiso lesiqingatha, umzekelo), ezinokuphinda ziphindwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Ukonwabisa » Ngaba iDisney plus inaye uHarry Potter?
Indlela yokwazi ukuba ndiyipasile ithiyori